Sambava: vola sandoka 22 tapitrisa Ariary no nandoavana lavanila 23kg | NewsMada
Sambava: vola sandoka 22 tapitrisa Ariary no nandoavana lavanila 23kg
Tantsaha mpamokatra lavanila no nosolokin’ny jiolahy tamin’ny vola sandoka mitentina 22 tapitrisa Ariary rehefa lasan’izy ireo ny entana. Saika hamono tena ny lehilahy iray noho ny fahadisoam-panantenany diso tafahoatra.
Ketraka ary saika hamono tena vokatry ny fahadisoam-panantenana tanteraka ny raim-pianakaviana iray noho ny fisolokiana nahazo azy tao amin’ny Kaomina Nosiarina-Sambava, ny alatsinainy teo. Araka ny fantatra dia lasan’ireo mpividy roa lahy izay nifanao fotoana tamin’ireo tantsaha tao amina hotely iray ao amin’ny fokontanin’Antanifotsy ny lavanila maina, milaja 23 kilaon’izy ireo. Nohazavain’ny zandary tao an-toerana fa hanamarina ny lanjan’ny entana ireo voalaza fa hividy ny lavanila 1 tapitrisa ariary ny kilao, ary navelan’ireo tamin’ireo tantsaha mpirahalahy ny fonosana volabe, nony raikitra ny varotra. Hagagana anefa ny nahazo ireto farany rehefa niandry ela ireo mpividy izay tsy niverina mihitsy nefa namela ny fonosam-bola be. Teo hoy ny loharanom-baovao no nahatonga ireo mpirahalahy nijery ny fonosana. Ankona tanteraka nahita ireo vola sandoka mitotaly 80.000Ar miampy ravin-taratasy maro, milokoloko ary notapahina mba hitovy habe amin’ireny vola tena izy ireny ny ambiny. Vokany, ketraka ary nikasa hamono tena ilay raim-pianakavina fa voasoloky noho ny fahadisoam-panantenany. Nohamarian’ny zandary anefa fa faly sy ravo ireo tantsaha tamin’ny nandrenesany fa nisy nahasahy nividy ny entany, izay isan’ny tsara kalitao ao an-toerana, ary namidy tamin’ny vidiny nahafa-po azy.
Angom-baovao no namantarana fa ny harivan’io tranga io ihany dia nametraka fitoriana teny amin’ny zandarimaria teo an-toerana ireo voasoloky ary fantatra, ankehitriny fa misokatra ny fanadihadiana ity raharaha ity.
Raha ny fanazavana voaray dia karohina, amin’izao fotoana izao, ilay jiolahy mpisoloky tompon’antoka niresaka tamin’ireo tantsaha ireo, taorian’ny fitarainana napetrak’ireo voasoloky. Nambaran’ny loharanom-baovao fa lehilahy iray no nanoro an’ireo tantsaha ireo mpividy lavanila ary nifandray tamin’ny antso an-telefaonina lalandava izy ireo nialoha ny fihaonana tao amin’ny hotely. Nambarany tamin’izany fa nilaza ireo jiolahy nialohan’ny fotoana rehetra fa tsy ao Sambava fa any Antalaha. Rehefa raikitra ny fifandaminana rehetra dia tapaka fa hihaona ao Sambava ihany ireo mpividy sy mpivarotra, ao amina hotely ao Antanifotsy II. Fantatra fa karohina ilay tompon’antoka tamin’ny fifandraisan’ireo jiolahy ireo tamin’ny mpividy. Angom-baovao no namantarana fa rehefa nantsoina ilay laharana nifandraisan’ny roa tonta dia mbola miasa sy mandeha. Nisy ihany koa ny fandraisana fepetra nanarahana ny resaka tamin’ny finday.